IDuckweed (iLemna minor) isitshalo samanzi esikhula ngokushesha esinothe ngamaprotheni nezinye izinhlanganisela zokudla okunempilo. Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziswa njengobuchwepheshe bokucubungula obusebenza kahle kakhulu futhi obunokwethenjelwa ukukhipha amaprotheni, i-lipids kanye ne-phyto-izakhi zomzimba kusuka ku-duckweed. I-Sonication ivumela ukwelashwa okulula nokusheshayo kwe-duckweed kwemikhiqizo ebangeni lokudla.
Idadawe ngezinhloso zokudla okunempilo
I-Duckweed (uhlobo lwe-Lemna), isitshalo sasemanzini esiqhakazayo, izitshalo ezincane kunazo zonke ezaziwayo. Eyaziwa nangokuthi iWolffia, udali wamanzi, noma amalensi amanzi, i-duckweed ikhula ezindaweni ezinamanzi ahlanzekile futhi ingatholakala emhlabeni wonke. Emkhakheni we-duckweed, izinhlobo ezahlukahlukene ezifana ne-Spirodela, Landoltia, Lemna, Wolffiella neWolffia ziyaziwa. Njengoba isitshalo seLemna sinamandla okukhula ngokushesha okwazi ukuphinda kabili ngosayizi nsuku zonke, i-duckweed ibambe intshisekelo kososayensi nonjiniyela bokudla abasebenza emkhakheni wezokudla, ukuvikeleka kokudla, kanye nokudla okusebenzayo. Ezingxenyeni ezithile zeNingizimu-mpumalanga ye-Asia, i-duckweed yaziwa kusukela kudala ngobuningi bayo bomsoco futhi yaziwa ngaphansi kwesidlaliso “inyama yemifino yemifino” ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwamaprotheni (ngaphezu kuka-45% wesisindo esomile). IDuckweed inikeza iphrofayli ephelele (njengamaqanda esikhukhukazi), equkethe wonke ama-amino acid ayisishiyagalolunye abalulekile futhi ayisithupha.
umshini we-ultrasonic I-UIP4000hdT ukukhishwa okuqhubekayo kwamaprotheni, i-lipids nezakhi ze-phyto kusuka kuma-botanicals afana ne-duckweed.
Ama-Lipids namaProtheni avela eDuckweed
I-Duckweed iqukethe amaprotheni angama-20-35%, amafutha angama-4-7%, kanye no-4-10% wesitashi ngesisindo esomile. Kuyathakazelisa ukuthi ukusatshalaliswa kwe-amino acid kuduckweed kuseduze nezincomo ze-WHO, isib, i-4.8% lysine, 2.7% methionine ne-cystein, ne-7.7% phenylalanine ne-tyrosine. Okuqukethwe yi-polyunsaturated fatty acids bekuphakathi kuka-48 no-71% kanti okuqukethwe okuphezulu kwama-n3 fatty acids kube nomphumela omuhle wenani lika-n6 / n3 lika-0.5 noma ngaphansi. ” (I-Appenroth et al. 2017)
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwe-Duckweed
Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziselwa ukukhipha amakhemikhali e-duckweed, ikakhulukazi amaprotheni nama-lipids njengemikhiqizo yokudla. Isidlo seLemna protein kanye neLemna lipids sikhishwe kahle futhi sihlukanisiwe nesitshalo sasemanzini esenziwe ngamadada.
I-Sonication Isetshenziswa Kanjani Ekukhishweni Kwedadaweed?
Ngemuva kokuvuna i-Lemna, kususwa amanzi amaningi (isb., Yi-centrifugation). Ngokukhishwa kwe-ultrasonic, i-biomass-rich (ie, Lemna-dense) slurry iyathandeka njengoba yenza inqubo ye-ultrasonic isebenze kahle. I-duckweed slurry ingaba ne-duckweed namanzi noma enye i-solvent yokuzikhethela. Le slurry ifakwa kwi-reactor ye-ultrasonic, lapho i-acoustic cavitation iphula khona i-matrix yeseli bese ikhipha izinhlanganisela ze-intracellular zingene endaweni yokukhipha amanzi noma i-solvent-based.
Isizinda se-Ultrasonic Extels ngu
Izimo ezimnene, ezingezona ezishisayo
Khetha iSolvent Solvent yakho
Isizinda se-Ultrasonic sihambisana (cishe) nanoma yiluphi uhlobo lwe-solvent. Ekucwaningweni kocwaningo, kukhishwe amakhemikhali edadawe kusetshenziswa izincibilikisi ezifana ne-polar solvent ethanol kanye nemixube ehlukahlukene engeyona eye-polar ehlanganisa i-methanol-ethanol, i-chloroform-ethanol, i-hexane-ethanol, i-diethyl ether-ethanol, i-petroleum ether-ethanol ngokuhlukile ivolumu isilinganiso.
Isixazululo esifanele ngokuhlanganiswa ne-ultrasonication siqinisa ukukhishwa kwe-phyto-nutrient ye-duckweed biomass. I-Ultrasonication homogenizes futhi iphazamisa ukwakheka kwamaseli esitshalo okuholela ekuphazanyisweni kweseli nokwahlakazeka. Isizinda se-Ultrasonic sisetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izitshalo ze-botanical, fungi, ne-algae.
Ultrasonic Extractors I-UIP2000hdT
Indlela Yokukhishwa Kwe-Ultrasonic
Amandla e-ultrasound ahlanganiswe noketshezi noma ama-slurries aholela kumiphumela enamandla kakhulu njenge-acoustic cavitation, shear kanye ne-vibration. Le miphumela ye-ultrasound yamandla isetshenziswa ngempumelelo ekuqhekekeni nasekuqothuleni izakhiwo zamaselula. Ngokwengeziwe, i-sonication inqamula ukubopha kwamangqamuzana ama-lipids, amaprotheni kanye nama-carbohydrate ukuze ama-macronutrients aqondisiwe kanye nama-phyto-chemical akhishwe engqamuzaneni leseli lezinto eziluhlaza, isb duckweed. Ngaleyo ndlela, i-ultrasonication iqinisa futhi ifinyeze isizinda kakhulu.
Ama-Ultrasonic Extractors wamaphrotheni angama-Duckweed namaLipids
Izici ezihlakaniphile zama-Hielscher ultrasonicators zenzelwe ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile, imiphumela yokuzala kanye nobungani bomsebenzisi. Amasethingi wokusebenza angafinyeleleka kalula futhi ashayelwe ngemenyu enembile, engatholakala nge-digital color touch-display nange-remote control yesiphequluli. Ngakho-ke, zonke izimo zokucubungula ezinjenge-net energy, amandla aphelele, i-amplitude, isikhathi, ingcindezi nokushisa kuqoshwa ngokuzenzakalela ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuyekeze futhi uqhathanise ama-sonication wangaphambilini futhi ukwandise inqubo yokukhipha i-duckweed ukuze isebenze kahle kakhulu.
Xhumana nathi manje ukuze ufunde kabanzi mayelana nesizinda se-ultrasonic duckweed, izinhlelo zethu zokukhishwa kwe-ultrasonic nolwazi lwamanani! Abasebenzi bethu abanolwazi oluningi bazokujabulela ukuxoxa nawe ngezidingo zakho zokufaka isicelo nokucubungula!